छोरीहरुले न्यायका लागि सडक संघर्ष नै गर्नुपर्ने ? « Bazar Dainik
छोरीहरुले न्यायका लागि सडक संघर्ष नै गर्नुपर्ने ?
6 June, 2022 12:46 pm
सरकारले गत जेठ १० गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, बाटोघाटो, उद्योग व्यवसाय जस्ता क्षेत्र प्राथमिकतामा छन् । बजेट पनि यि नै विषयमा केन्द्रित रहेर आइसकेको छ ।
तर पछिल्लो समय सडक र सदन दुवैतिर बहसको विषय बनेको बलात्कार र अन्य यौनजन्य हिंसा न्यूनिकरणको विषयलाई राष्ट्रको नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न सकेन । जबकि, देशै स्तब्ध बनाउने गरिका बलात्कार र बलात्कार प्रयासका दर्जन बढी घटनाका श्रृंखला पछिल्लो एकसातामा सार्वजनिक भएका छन् ।
सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा बलात्कृत भएकी युवतीले आफूमाथि भएको कुकृत्यबारे सार्वजनिक गरेलगत्तै देशका विभिन्न ठाउँबाट पीडितहरु न्यायको खोजीमा खुल्न थालेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै २ हजार ५३२ जबरजस्ती करणीका घटना भएका छन् ।
यही आर्थिक वर्षमा जबरजस्ती करणी उद्योग, बाल यौन दुराचार लगायतका अन्य यौन हिंसाका गरी ३ हजार ५८४ घटना दर्ता भएका छन् । यो पनि प्रहरी कहाँ पुगेर दर्ता भएका घटनाको संख्या मात्र हो, पछिल्लो समय सार्वजनिक भइरहेका घटना विवरणहरुले अधिकांश घटनाहरु कानूनी दायरासम्मै नपुग्ने गरेको देखाउँछ । थोरै मात्र त्यस्ता ‘सर्भाइभर’ छन्, जसले आफूमाथि भएको हिंसाबारे खुलेर बालेका छन् ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक दिन औसतमा ६ जना महिला तथा किशोरी बलात्कृत हुने गरेको देखिन्छ, दैनिक तीन जना माथि बलात्कारको प्रयास हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । हिजोको दिनमा छोरीहरुले आफूमाथि भएको यौन अपराधलाई खुलेर भन्न सक्ने वातावरण थिएन । अहिले पीडित केही खुल्न थालेका छन् । पहिलेको तुलनामा बलात्कारका घटना प्रहरी समक्ष पुग्ने दर पनि बढेको छ । यद्यपि, अझै पर्याप्त भइसकेको छैन ।
पीडितले बोल्न खोज्दा पनि हाम्रो सामाजिक र न्यायिक संरचनाले उनीहरुलाई साथ दिँदैन । हालै चर्चामा आएको एक घटनामा पूर्वमिस नेपाल माल्भिका सुब्बाले पनि पीडितलाई न्यायका लागि सहयोग नगरेको खुलेको छ । अर्को घटनामा प्रहरीसम्म उजुरी पुगेपनि पीडक ७ वर्षसम्म पक्राउ परेका छैनन्, बरु अझै सार्वजनिक संस्था चलाएर बसेका छन् ।
पछिल्लो समय यौनहिंसाका घटनाले सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन, सडकसमेत तात्न थालेको छ । संसदमा पनि न्यायका लागि आवाज उठ्न थालेको छ । गत जेठ ४ गते एक किशोरीले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमार्फत् आठ वर्ष पुरानो बलात्कारको घटना सार्वजनिक गरिन् ।
सन् २०१४ मा भएको सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी किशोरीले टिकटकमा २० वटा भिडियो क्लिप राख्दै आफूलाई कार्यक्रमका आयोजकमध्येका एकजनाले बलात्कार गरेको खुलाइन् । कार्यक्रम पछि ‘सक्सेस पार्टी’का नाममा बानेश्वरस्थित एभरेष्ट होटलमा बोलाएर आफू माथि जबरजस्ती करणी गरेको वृत्तान्त उनले टिकटकमा सार्वजनिक गरिन् ।
घटना सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जाल, सडकमा किशोरीको पक्षमा जनमत देखियो । पीडा कम गर्न सामाजिक सञ्जाललाई माध्यम बनाएकी किशोरीले सबैको साथ पाइन् । विस्तारै आरोपित पुरुष मनोज पाण्डे रहेको खुलाइन् । तर बलात्कारको मुद्दामा उजुरीका लागि हदम्याद रहेका कारण आफूले न्याय नपाउने हो कि भन्नेमा उनी चिन्तित थिइन् ।
यो घटनामा पीडित किशोरीले आठ वर्षसम्म आफैँसँग गरेको संघर्ष काहाली लाग्दो छ । मानसिक रुपमा विक्षिप्त बनेकी उनले पीडा सहन नसकेर पटकपटक आत्महत्याको असफल प्रयास गरिन्, दुव्र्यसनमा पनि पुगिन् । कला र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा उज्जवल भविष्यको सपना बुनेर मोडलिङको दुनियाँमा आएकी उनले बाहिरबाट उज्यालो देखिने कला क्षेत्रमा भएका अध्यारो पाटोलाई सबै सामु उदांगो पारिदिएकी छन् । ढिलै भए पनि पीडकलाई प्रहरी हिरासतसम्म पु¥याएकी छन् ।
यो घटना सेलाउन नपाउँदै सुनसरीको इटहरीकी अर्की किशोरीले ब्लूमिङ लोटस इङ्लिस स्कुलका तत्कालीन प्रिन्सिपल राज खड्काले पटक–पटक बलात्कार गरेको सार्वजनिक गरिन् । २०७३ सालमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत रहेको समयमा प्रिन्सिपलले बाथरुम, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर प्रयोगशाला, अफिस, होस्टल कोठामा बलात्कार गरेको उनको भनाइ छ ।
एसईई दिएपछि उनले हिंसाविरुद्ध बोल्ने साहस गरिन्, आफूमाथि भएको हिंसाबारे परिवारलाई सुनाइन् । किशोरीले इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा खड्काविरुद्ध जबरजस्ती करणाीको कसूरमा किटानी जाहेरी पनि दिइन् । खड्कालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । प्रहरीलाई निरन्तर फलोअप गरिरहेकी उनले लामो समयसम्म पनि खड्का पक्राउ नगरेपछि न्याय पाउने आश गुमाएकी थिइन् ।
तर, सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी किशोरीको न्यायका लागि सञ्जाल अनि सडकमा आवाज उठेको देख्दा उनलाई पुनः न्याय पाउने आश जाग्यो र सात वर्षसम्म आफूसँग मात्र रहेको घटना सार्वजनिक गरिन् । अहिले प्रहरीले फेरि घटनामा अनुसन्धान थालेको छ ।
हदम्याद खारेजीको माग
पछिल्ला समय सार्वजनिक भएका घटनाहरुले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा कानुनमा भएको हदम्याद खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नेपालको मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ मा बलात्कार कसुरबारे उजुरीको हदम्याद तोकिएको छ । हदम्यादका कारण बलात्कारीले सजिलै उन्मुक्ति पाउने हुनाले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा हदम्याद खारेज गर्नुपर्छ । पीडकको डर, त्रास र धम्कीका कारण लामोसम्म कसैलाई आफूमाथि भएको कुकृत्यबारे बताउन नसक्ने अवस्था हुन्छ । फेरि कसैलाई भनिहाले पनि कानूनी दायरामा जान असहयोग गर्ने सामाजिक संरचना पनि छ ।
हदम्याद हटाउनुपर्ने पक्षमा अहिले माहौल पनि बन्दै गएको छ । यो विषयमा देशै तातेका वेला संसद्ले पनि यसबारे निर्मम समीक्षा गरेर निर्णय गर्नुपर्छ । हदम्याद हटाउन ढिला गर्नु हुँदैन । संसदमा महिला अधिकारका विषयमा प्रखर देखिने नेतृहरु विन्दा पाण्डे, पुष्पा भुसाल, अमृता थापामगर लगायतले पनि यौनजन्य हिंसाका घटनामा उजुरी दर्ता गर्नका लागि राखिएको हदम्याद हटाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
सार्क राष्ट्रहरु भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र माल्दिभ्समा बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा हदम्याद तोकिएको छैन । नाबालिकालाई अपहरण, शारीरिक दबाब, ब्ल्याकमेल गरी यौन हिंसा गरिएका घटना एउटा बलात्कारको घटना मात्र होइन, यो सिंगो मानवताविरुद्धको अपराध हो । त्यसैले पनि यस्ता किसिमका घटनामा हदम्याद राखिनु हुन्न । हुन त हालै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि बलात्कारको कसूरमा हदम्याद घटाउने संकेत गरेका छन् । यसलाई देउवाले प्राथमिकता लिएर चाँडो टुंगोमा पु¥याउन् ।
सडकमा नपुगी न्याय नपाइने समाज
गत वर्ष कञ्चनपुरकी १४ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । दोषीलाई सार्वजनिक गर्न माग राख्दै देशैभर प्रदर्शन भयो । निर्मलाको न्यायका लागि हजारौँ नागरिक स्वस्फूर्त सडकमा उत्रे ।
सडकबाटै तत्कालिक गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको राजीनामाको माग समेत भयो । तर, पनि प्रशासनले निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन सकेन । घटनामा नेपाल प्रहरी नमज्जासँग चुक्यो ।
त महिना मोरङको शिक्षा विकास माविका शिक्षक मनोज पौडेलले विद्यार्थी छात्रा माथि गरेको यौन दुव्र्यवहारविरुद्ध स्थानीयले आन्दोलन नै गरे । आन्दोलनको क्रममा भिडको आक्रमणमा परी प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठले ज्यान गुमाइन् । विभिन्न घटनामा आन्दोलन र सडक प्रदर्शन नभइ प्रहरी संवेदनशील नबन्ने गरेका कारण बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको न्यायका लागि सडकमा नै नउत्री केही हुँदैन भन्ने मान्यता बस्यो ।
खबरदारी र न्यायको माग गर्दै नेपालमा सडक संघर्ष बेलाबेला हुँदै आएको छ । तर, सबै महिला म माथि हिंसा भयो भनेर सडकसम्म आउन सक्दैनन् । जब सडक तात्दैन तब संसद तात्दैन । जब संसद तात्दैन तब प्रहरी तात्दैन । घटनालाई संसदसम्म पु¥याउनका लागि भएपनि आज नागरिक सडकमा आउन बाध्य छन् । त्यही कारण आज काठमाडौंमा शिक्षकले यौन दुव्र्यवहार गरेको विषयलाई लिएर विद्यार्थीहरुले सडक तताइरहेका छन् ।
मंगलबार चाबहिलमा रहेको सेन्ट लरेन्स कलेजका कोअर्डिनेटरले छात्रा माथि यौन दुव्र्यवहार गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत अगाडि विद्यार्थीले प्रदर्शन गरे । सडक प्रदर्शन पछि प्रहरीले कलेजका कोअर्डिनेटर जनार्दन अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । यसरी हरेक घटनामा सडक प्रदर्शन नै गर्नु पर्ने भए सडकमासम्म पहुँच पु¥याउन नसक्ने कति छोरीहरु आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् । पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्मका गाउँका कुनाकन्धरामा कति छोरीहरु बलात्कृत भएका होलान् । उनीहरुको आवाज कसले बोलिदिन्छ ?
२१ औँ शताब्दिमा न्यायका लागि सडक संघर्ष गर्नु पर्ने कुरा कदापि न्यायोचित होइन । राज्यका निकायमाथि आज किन नागरिकले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ? हरेकपटक प्रहरी महिला हिंसाको विषयमा संवेदनशील बन्नबाट किन चुक्छ ? प्रहरी अझै पनि किन पीडितमैत्री बन्न सकिरहेको छैन ? यो विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफूहरुको सेवा प्रवाहमाथि निर्मम समीक्षा गर्ने वेला आएको छ ।
नेपालको संविधानले महिलालाई आत्मसम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । कहीँकतैबाट महिला आवाज नदबियोस्, महिला हिंसाका सिकार नबुनुन् भनेर अनेक कानुन बनेका छन् । महिलाको सुरक्षा र स्वतन्त्रताका लागि राष्ट्रि तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झैता भएका छन् ।तर, यति धेरै संयन्त्रका बीच पनि आजको पुस्ताले हिंसाविरुद्ध संघर्ष गरिरहनुपरेको छ ।
जबसम्म समाजमा एउटी छोरी निर्धकसँग बाँच्न सक्दिन, तबसम्म उसले आफ्नो योग्यता र क्षमता समाज र मुलुकको हितको लागि खर्च गर्न सक्दिन । त्यसैले छोरीहरुलाई निर्धकसम्म बाँच्न पाउने अधिकारी सुनिश्चित गर्नका लागि राष्ट्रले योजना ल्याउनै पर्छ, लगानी गर्नै पर्छ ।
सबै पीडित जाहेरी लिएर प्रहरीसम्म पुग्दैनन् । स्थानीयदेखि संघीय सरकारले पनि न्याय दिन सकिरहेको छैन । सरकारी स्तरबाट केही प्रयास नभएका होइनन् । तर, सीमित प्रयासले सबैलाई नसमेटेको कारण आज सयौँ छोरीहरु सडकबाट आवाज उठाइरहेका छन् । त्यसैले सरकारले सबैभन्दा पहिले प्रत्येक जिल्लामा यौन हिंसा सम्बन्धि रिपोर्ट गर्न मिल्ने ‘हेल्प डेक्स’ राख्न आवश्यक देखिन्छ । ताकि, न्यायको लागि सडक संघर्ष नै गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् ।